Waxaa ku duntey buur ka culus daarta Empire State iyagoo ciidda ka hooseeya 2300 oo cagood (Qaybtii 2-aad) | Hadalsame Media
Home Ku Biiri Aqoontaada Waxaa ku duntey buur ka culus daarta Empire State iyagoo ciidda ka...
Waxaa ku duntey buur ka culus daarta Empire State iyagoo ciidda ka hooseeya 2300 oo cagood (Qaybtii 2-aad)
(Hadalsame) 08 Agoosto 2019 – Qaybtii Labaad ee ee dhacdadii ka hadleysay macdan qodayaashii godka kusoo dumay Bishii August 5-teedii Sannadkii 2010-kii waxaan ku hakiyey iyadoo mudo Laba usbuuc ama todobaad ah ay godkii ku jireen ragii macdan qodayaasha Reer Chili ay dhacday in isku celcelis ahaan nin walba uu ka lumay culays 20 Pound ah ama 20 kiilo.
Qaar baa socodku dhibay, qaarna maqaarku Lafta ku dhegey, xanuuno kala duwana ay godka ka qaadeen. Halkii ayaan kasii amba qaadayaa Qeybta Sadexaad uguna dambaysa ee la socod wanaagsan walaal. Halkan ka daawo qaybtii 1-aad.
Waxaa dhacday in maalintii 16-naad xabbad Tufaax ah inta Laba loo kala jeexay ayaa jeexna meel la dhigay jeexii kalena waxaa loo qaybiyey 33 dii nin, mid kastana waxaa ku soo aaday cad yar oo cidida Farta le’eg.
Mid baa yiri qofka ugu hor dhinta waa in la cuno hilibkiisa si inta nooli ugu sii badbaado.
Mid kale ayaa yiri mayee waa inaynu Ninka Reer Bolivia haddeer qalanaa si aynu inteena isku wadanka ahi ee reer ( Chile) aynu u badbaadno.
Oday ayaa yiri armay ka fiican tahay inuu noogu dambeeyo Ninka Reer Bolivia ahi oo hadhow hadduu nolol dibadda ugu baxo loo yiraahdaa Reer Chilie Waa dad martida badbaadinteeda u dhinta.Labada figradoodba waa loo guuxay lagumase dhaqaaqin.
Oo hadday cunaan Ninka Reer Bolivia oo ay intooda isku waddanka ahi ku badbaadaan cunidda Ninka shisheeyaha ka ah, waa run-tood oo dadkooda ayey ku badbaadsadeen oo iyagaa isku waddan ah oo is xiga. Waa iyadoo 33 nin oo Soomaali ah oo dhiman lahaa ay inta qashaan nin Ethiopian ah ay ku badbaadaan oo taasi guul ayey Soomaalida u ahaanaysaa oo dadkoodii ayaa ugu badbaaday.
Haddii Ninka Reer Bolivia ah la xanaaneeyo oo uu isagu noqdo kii ugu nolol dambeeyeyna waa guul kaloo waxaa Reer Chile loo aqoon sanayaa dad dhaqan wanaagsan martida kula dhaqma oo waxay diideen in la yiraahdo ninkii miskiinka ahaa oo martida u ahaa ayey qasheen oo magac xumay u soo jiidaysaa Reer Chili.
Dhowr iyo toban mashiin ayaa ku jabay in buurtaas la dalooliyo, ingineeradii iyo qalabkii aduunka ugu xoog badnaa oo wax Lagu duleelin karey ayaa la isu keenay, dowladaha ugu awooda badan dunida ayaa mid kastaa hawsha dhinac uga jirtey.
Hal bilyan oo qof ayaa maalin kasta warbaahinta kala socotay, 3000 oo Wargeys iyo idaacado ayaa ku mashquulay la socoshadda xaaladaas. Malyuumaad lacago ah ayaa ku baxey.
Is haaraan iyo is hiif ayaa golayaasha dowladda Chile hareereeyey, madaxweynaha dalkaas ayaa khalkhal ku galay in hadduu badbaadinta raggaas awoodi waayo uu jagada isaga dego.Madaxweynahu teendho ayuu ka ag dhistay buurta agteeda si uu maalin kasta ula socdo xaalada muwaadiniintiisa godku ku dumay, dhamaan wasiiradiisa iyo xildhibaanada wadanka ayaa qaaraan iyo gurmad waqtigooda oo dhan dul dhigay iyagoo ka cabsi qaba inay 33-daas qof dhintaan hadhowna dowladoo dhami is casisho.
Bal kawarama kumanaan soomaali ah ayaa dagaalo, Qaraxyo, silic iyo darxumo u dhinta madaxdeena ka ugu fiican ayaa yiraahda Allaha u naxariisto sidii in ay ducadoodu kacdo.
17 maalmood kadib ayey markii ugu horeysey 33 dii nin dushooda iftiin la soo dalooliyey ka arkeen oo rajadii noloshu dib ugu bidhaantay, Godka kor Laga soo dalooliyey cunto iyo daawo keliya ayaa looga soo daadinayey oo dadka lagama soo saari karin, 69 Maalmood ayey nimankaasi God kaas ku jireen waxayna noqotay xiligii ugu dheeraa oo dad God ku dumay ay muddo intaas le’eg ku jiraan kuna badbaadeen.
69 kaas casho madxweynuhu shaqadii ugu badnayd oo golihiisu qabtaan waxay noqotay inay godkaas dul joogaan, lacag uruurin, qancinta qoysaskii 33-nin, qaylo dhaan beesha caalamka ah ayuu madaxweynuhu waqtigiisa ku qaatay.
Markii ay soo baxeen Hal nin ayey af-hayeen ka dhigteen oo u hadla inta kale waxay isku afgarteen inaysan waxba sheegin weliba wixii sumcad daro keeni kara oo godka dhexdiisa ka dhacay inaysan weligood soo haddal qaadin.Waa sababta ilaa haddeer loogu yeero geesiyaddii Reer Chile, Waa sababta buugaag dunida caan ka ah loogu qoray sheekadooda oo halkii buug oo sheekadooda qaataba malaayiin lacag ah ay uga qaataan, Waa sababta ay Shirkada Filimada ee Hollywood-ka Mareykanku filinkii ugu dambeeyey (The 33 Man) looga sameeyey oo ay lacagta badan ku qaateen.
In kasta oo filmkaasi buuq badan dhaliyey maxaa yeelay cidna ma helin sheekadii Godka ka dhexdhacday oo sax ah oo sheekadda intii xumayd nimankaasi marna ma aysan sheegin haddana Hollywood way iska mala awaaleen sheekadda qaarkeed.
UGU DAMBEYNTII HADDABA SOOMAALI AHAAN MAXAYNU KA BARAN KARNAA 33-da nin Macdan qodayaasha reer Chili ee godka uu kusoo dumey waxaan ka baran karnaa Casharadan kala ah:
1- Inaan iska ilowno madaxweyne oo aan doorano iskuna dayno inaynu helno Hogaamiye waayo Soomaalida 30 sano ku dhawaad ayuu God ku dunsanaa, labaatan madaxweyne ku dhawaad ( Marka Lagu daro Madaxda Maamul Goboleedyadda) ayey yeesheen welise hal hogaamiye ma yeelan.
2- Soomaalida oo dhami Waa Hal qoys ee sidii 33-dii nin ee Reer Chili nafta qofka Soomaaliga ah ee Islaamka ah qaali laga dhigo.
3- 30 sano ku dhawaad ayey Soomaali burbursaneyde xoogaaga dhaqaalaha ah ee Soomaalidu heli karto in si cadaalada ah loo wadaago sida 33-da nin cuntada yarta ah ay u qaybsanayeen labada bilood.
4- In wadamada dariska ah aysan sina ku ogaan sirteena iyo ceebaheena oo Aan la ogolaan inaan xumaanteena u kala gudbino wadamo qalaad, sida 33-da nin ee Reer Chili ay ceebahoodii godka dhexdiisa u qariyeen oo aysan cidna ula wadaagin.
Walaal guud ahaan warbixintan intaas ayey ku egtahay waxaanan kaaga mahad celinayaa inaad wax iga siisey waqtigaaga qaaliga ah ee qiimaha badan oo aad akhrisay qeybahii ay ka koobneyd warbixintan waa inoo qormooyin iyo warbixino kale oo xiiso leh Insha Allaah.
Previous articleGOOGOOSKA: SSC Napoli vs FC Barcelona 1-2 (Barca oo ku badisay lugta hore ee Serie A-La Liga))
Next articleWax kasta oo aad uga baahan tahay xujeeyda gaartey magaalada Maka